A MacBook na-enweghị keyboard ka Apple | Esi m mac
A MacBook na-enweghị keyboard ka Apple chebere
Ihe niile laghachi. Kọmputa mbụ m nyefere n’aka m bụ Sinclair ZX81. Otu onye ọrụ ibe ya zụtara ya. Dịka ọ na-enweghị nchekwa, ọ bụrụ na anyị chọrọ "kpọọ" ihe, anyị ga-ebu ụzọ pịnye ntuziaka niile maka egwuregwu na Basic. Enyi m na-agwa m ha, na-anara m magazin kwa ọnwa a na-ebipụta n’oge ahụ, m na-ede ha. Anyị ga-eji mkpịsị uhie ndị ahụ dị oji na nke ọcha gwuo egwu nwa oge, ma n'echi ya, amalite.
Nke a "vintage" vibe dị mkpa n'ihi na kwuru ZX81 nwere keyboard "keyless". Ọ bụ otu akpụkpọ ahụ rọba na-eji ire ụtọ ebi akwụkwọ, nke ị ga-pịa iji kpọtụrụ kọntaktị a na-ebipụta nke dị n'okpuru. Dị ka ndị ọzọ na-agbakọ Casio "kaadị akwụmụgwọ" mgbako. Ugbu a, Apple amachibidoro MacBook na-enweghị igodo, dị ka kọmputa ahụ Clive Sinclair mepụtara. Ihe niile laghachi.
Enyerela Apple ikikere ọzọ metụtara MacBook. Izu ole na ole gara aga, ezigara m ọzọ noticia na patent ọzọ nke kọwara echiche nke MacBook nwere mpaghara haptic na ikpe ahụ kama trackpad. N'oge a ikikere ohuru enyere na March 30, 2021 dị ka ọ ga-ewepụ ọ bụghị naanị trackpad, kamakwa keyboard zuru oke.
Akwukwo ohuru ohuru a bu nke akuko "ntinye ihe ntinye onodu ihe omuma nke igwe eletrọniki". Echiche bụ iji zere nsogbu ahụ na teknụzụ ndị na-arụ ọrụ, dị ka Apple nwalere nsogbu nsogbu urukurubụba-usoro nke na-ata ahụhụ mgbe ụfọdụ enweghị nsogbu mgbe ájá na unyi gbakọtara n'okpuru igodo ahụ.
Otu nhazi mpaghara dị larịị
Ihe oyiyi nke gosipụtara echiche nke patent nke ọma.
Na patent a, mpaghara ntinye, ebe keyboard na trackpad na-adịkarị, bụ otu kọntaktị kọntaktị. N'okpuru elu a ka ọkwa abụọ dị na nke a na-ewu njikwa njikwa.
Ngwunye na-enye nrụgide nwere ike ịnye nzaghachi ntinye onye ọrụ yana obere oghere translucent dị n'elu igwe nwere ike ikwe ka bọtịnụ ma ọ bụ akụkụ gosipụta ma tinye ntọala dị iche iche.
Ọ bụ ihe na-akpali mmasị na, dịka patent si kwuo, onye ọrụ nwere ike ịhazi mpaghara ntinye onwe ya. Yabụ kama keyboard qwerty, enwere ike iji elu elu niile mee ihe dị ka ọnụọgụ ọnụọgụ, ma ọ bụ otu trackpad, dịka ọmụmaatụ.
Anyị ga-ahụ ma ọ bụrụ na otu ụbọchị echiche amachibidoro iwu a ga-abụ eziokwu, ma ọ bụ na ọ ga-abụrịrị na a gbara akwụkwọ dị ka patent karịa narị otu narị n'ime ha na-anọgide na naanị echiche na ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » A MacBook na-enweghị keyboard ka Apple chebere
Erughị ọkara nke ọdịnaya na Apple Podcast nwere 10 ma ọ bụ karịa ngosipụta
Thgha mythic: Raven's Banquet bonus episode n'ihu nke oge XNUMX premiere